ट्राफिक महाशाखाले उठाउने राजस्व घट्यो, गत आवमा करिब २१ करोड संकलन | Notebazar
ट्राफिक महाशाखाले उठाउने राजस्व घट्यो, गत आवमा करिब २१ करोड संकलन
काठमाडौं । ७श्रावण, २०७८, बिहीबार / Jul 22, 2021 17:31:pm
महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को असार मसान्त सम्ममा करिब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे ५ करोड रुपैयाँले कम हो ।
महाशाखाले ट्राफिक नियम उलङ्घन गरेवापत गत आव भित्र ३ लाख ३० हजार ८६७ सवारीलाई कारवाही गरेको जनाएको छ । महाशाखाको कारबाहीमा परेका ती सवारी साधनबाट आव २०७७/७८ मा २० करोड ९६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो । जुन आव २०७६/०७७ को तुलनामा ५ करोड ४४ लाख ९३ हजार ५०० रुपैयाँले कम हो ।
महाशाखाले आव २०७६/०७७ मा ४ लाख १४ हजार ४८३ जनालाई कारबाही गरेको थियो । जसबाट महाशाखाले २६ करोड ४१ लाख ३९ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
महाशाखाले उपत्यकाका विशेष तीन लिल्ला क्रमश ललितपूर, भक्तपुर र काठमाण्डौमा सवारी सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थीत होस, नियम कानुनको पालना गरुन र गल्ती नगरुन भन्ने हेतुले राजस्व उठाउने गरेको जनाएको छ ।
उपत्यकामा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको जनसंख्या तथा सवारी चाप, सवारी व्यवस्थापनमा प्रविधिको अभाव, सिमित साँघुरा सडकहरू, सवारी नियम तथा ट्राफिक संकेत सम्बन्धी सडक प्रयोगकर्ताहरुमा रहेको ज्ञानको कमी र ज्ञान भएकाहरुबाट समेत ट्राफिक नियमको उलङ्घन गर्ने प्रवृतिका बढ्दो छ । यसै कारण पनि उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने कार्य जटिल एवं चुनौतिपुर्ण रहेको महाशाखाको भनाई छ ।
महाशाखाले २०६८ साल मंसिर १७ गतेबाट मा.प.से कारबाही तथा राजस्व विवरण अभियानको सुरु गरेको हो । त्यसै अभियानमा २०६९ साल असोज १५ गतेबाट मा.प.से. कारबाहीमा परेका विरुद्ध मुद्धा चलाउन सुरु गरेको हो । तर २०७५ सालबाट भने मुद्धा चलाउन नमिल्ने भयो ।
महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १० हजार ४८० जनालाई मा.प.से. कारबाही गरेको छ । जसमा ९६ जना महिला र ९ हजार १६३ जना पुरुष रहेका छन् । जसबाट ९ हजार २५९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २५ हजार ९४३ जनालाई मा.प.से. कारबाही गरेको थियो । जहाँ २९२ जना महिला र २५ हजार ६५१ जना पुरुष रहेका थिए । जसबाट महाशाखाले २२ हजार ६३२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १५ हजार ४६३ जना कम र १३ हजार ३७३ रुपैयाँ राजस्व घटेको हो ।
फुटपाथ तथा सडक पार्क कारबाही
त्यसैगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आव २०७७/७८ मा फुटपाथ तथा सडक पार्क गर्ने २९ हजार २४७ जनालाई कारबाही गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ११ हजार ३९० ले कम हो ।
अघिल्लो अर्था आ.व. २०७६/०७७ मा फुटपाथ तथा सडक पार्क गर्ने ४० हजार ६३७ जना कारबाहीमा परेका थिए ।
बढी भाडा कारबाहीमा
महाशाखाले आव २०७७/७८ मा मिटरमा जान नमान्ने, मिटर विगार्ने, भाडा अनियमितता गर्ने ५ हजार ६३६ जना चालकहरुलाई कारबाही गरेको छ । महाशाखाले गत आवमा ७ हजार ९१८ जनालाई कारबाही गरेको थियो ।
नक्कली नोटसहित दुई भारतीय पक्राउ 1 day ago
सीआईबिद्धारा बैंकिङ कसुरका फरार अभियुक्त पक्राउ 03/09/2021
स्रोत नखुलेको ६ लाख सहित पर्साबाट १ पक्राउ 29/08/2021
तीन लाख नगद सहित १९ जुवाडे पक्राउ 27/08/2021
युरोप पठाइदिने प्रलोभनमा ६ लाख ठगी गर्ने प्रहरी नियन्त्रणमा 27/08/2021
पन्ध्र केजी गाँजासहित खोटाङबाट एक पक्राउ 22/08/2021
स्रोत नखुलेको पौने २ लाख भारु सहित रौतहटबाट २ पक्राउ 19/08/2021
पौने ३ लाख नगद सहित १० जुवाडे नियन्त्रणमा 18/08/2021